Praiminisitra Solonandrasana Olivier : “Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly” -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Solonandrasana Olivier : “Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly”
Praiminisitra Solonandrasana Olivier : “Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly”
07/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Raharaham-pirenena goavana ny ady amin’ny kolikoly ka manohana ny ezaka ataon’ny Bianco ny fitondram-panjakana. Mahakasika ny tetibola hampiasain’ny Bianco, hisy fiovana ny loharanon-ketra miaraka amin’ny fanohanana ara-tetibola amin’ny taona ho avy. Noho izany, manolo-tena aho hampiakatra ny vola omena ny Bianco mba hahafahany miatrika ireo asa nampandraiketan’ny governemanta azy”, hoy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly, teny Antaninarenina, nandritra ny fanokafana ny latabatra boribory ho an’ny mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola, nokarakarain’ny Bianco. Fotoana ihany koa nanararaotan’ny Lehiben’ny governemanta nisaotra ireo mpiara-miombon’antoka noho ny fanoloran-tenan’izy ireo sy ny fanohanana ary ny fanampiana omen’izy ireo ny governemanta manoloana ny ady amin’ny kolikoly izay imasoan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Ny governemanta Malagasy, miaraka amin’ny Bianco izay vonona hatrany hiara-hiasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola mba ho tena azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly eto amintsika, ka hipaka amin’ny ady atao amin’ny fahantrana ny ezaka rehetra izay atao.
Taorian’ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny taona 2015 ny paik’adim-pirenena momba ny ady amin’ny kolikoly ho an’ny folo taona manaraka, sy ny fankatoavana ny drafitr’asa mahakasika an’ity ady lehibe ity, ny Bianco dia mampanan-tena fa hanatratra ny “plan de travail annuel (PTA)” ho an’ny taona 2017. Ny tanjon’ity latabatra boribory ity izay mikendry indrindra ny hanetsehana ny fanohanan’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola amin’ny famolavolana ny PTA 2017 izay sy ny asan’ny Bianco ho an’ny taona maromaro, ary ny fampirindrana ny fanohanana ara-bola efa azo, mba hahafahana mahazo valiny ho azo tsapain-tanana amin’ny famolavolana ny paik’adim-pirenena momba ny ady amin’ny kolikoly. Lehibe ny fanamby ka mitaky ireo mpisehatra rehetra amin’ny ady amin’ny kolikoly ny fitondram-panjakana, ary tafiditra ao anatin’io ny fanamafisana ny fandraisan’andraikitra ny tsirairay ho an’ny fandaharan’asa mahomby sy mitondra zava-baovao.
Sekoly ambony etsy Ampefiloha : Mifangaro amin’ny mpivaro-toaka
Maniry sahala amin’ny anana, hoy ny fomba fiteny, ny fanokafana oniversite tsy miankina na ireo ivon-toerana ambony (IST) eto Madagasikara. Tao anatin’ny taona maro dia niroborobo be ity sehatra iray ity. Mampalahelo anefa, fa dia ...Tohiny
Manakara : Nahazo rano fisotro madio ny mponina ao Sakoana
Sahara Rabearisoa : Nofatoran’ny volan-dRajoelina
Filoha tany Abidjan : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika Rajaonarimampianina